Lilaxaze umsebenzi iphoyisa elibophe ngesihluku | News24
Lilaxaze umsebenzi iphoyisa elibophe ngesihluku
Dallas – Iphoyisa laseTexas elaqoshwa kwi-video likhiphela intombazane isibhamu ngemuva kwephathi lilaxaze umsebenzi ngokusho kombiko.
Leli phoyisa laqoshwa libopha ngesihluku intombazane emnyama lize liyicindezela ngedolo eqolo esigamekweni abaningi abasithathe njengaleso esihambisana nokucwasa okuqhutshwa ngamaphoyisa ase-United State kubantu abamnyama.
Isikhulu samaphoyisa saseMicKinnney uGreg Conley uzihlangulile kwisenzo sika-Eroc Casebolt.
OLUNYE UDABA:Ivideo: Isihluku amaphoyisa ebopha abamnyama
Uthe okwenziwa uCasebolt akuhambisana nomnyango awuholayo njengoba beqhuba uhlelo lwamaphoyisa ngokusezingeni eliphezulu.
Le video yaleli phoyisa elimhlophe isabalale ezinkundleni zokuxhumana abantu bababaza isihluku esingenanembeza esikhonjiswe ebophe le ntombazane namanye amabhungu.